သူသာတကယျခဈြရငျ . . . – Shinyoon
သူသာတကယျခဈြရငျလို့တှေးလိုကျမိရငျ ကြှနျမ ရငျတှနောရပါတယျ ။ သူတကယျမခဈြခဲ့ပါလားဆိုတာကို လကျသငျ့ခံနိုငျလောကျတဲ့အထိ နှလုံးသားမမာခဲ့တာပေါ့ တကယျလို့ သူသာ တကယျခဈြရငျ ကြှနျမ မကျြရညျတှေ ကလြာစရာတောငျ မလိုဘူးလေ ။ ဖွဈနိုငျရငျ . . .ကိုယျ့ကို မခဈြလို့နာကငျြစခေဲ့တဲ့သူကို ကိုယျ့ဘကျကလဲ မာနတှထေားပွီး မပေ့ဈခငျြတယျ ။
သူသာ တကယျခဈြရငျ . . .ကိုယျ့ကို ပြျောအောငျမထားနိုငျခဲ့ရငျတောငျ မကျြရညျတှေ ကစြမှောမဟုတျဘူးလေ ။ အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျ အဆငျမပွတေဲ့အကွောငျးတှေ ပွောပွီး အဆငျပွအေောငျ တိုငျပငျဆှေးနလောမှာပေါ့
သူသာ တကယျခဈြရငျ . . .ဘယျလောကျအလုပျမြားမြား ကိုယျ့ကို တဈခကျြမဟုတျ တဈခကျြတော့ သတိတရရှိမှာပါ ။ အလုပျမအားလို့ဆိုတဲ့အကွောငျးပွခကျြကတော့ တကယျတော့ မပွညျ့စုံပါဘူး ဘာလုပျနလေို့မအားတာပါဆိုတဲ့ အကွောငျးတဈစုံတဈရာတော့ သူ သတိတရနဲ့ပွောဖို့အားကောငျးပါတယျ ။ သူသာတကယျခဈြရငျ . . ကြှနျမက မြှျောနတေယျဆိုတာမှနျး ကောငျးကောငျးသဘောပေါကျမှာပါ ။
သူသာ . . .တကယျခဈြရငျ ဆိုတဲ့ အတှေးတှကေို ကြှနျမ ဆကျပွီး မတှေးခငျြတော့ဘူး ။ပိုပွီးတှေးလလေေ . . .သူက ကြှနျမကို မခဈြမှနျး ပိုပွီးသိလာလာလလေမေို့ကြှနျမ ဆကျပွီး မတှေးခငျြတော့ဘူး ။ ကြှနျမက ပှငျ့လငျးတတျတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျပါ မလြှို့ဝှကျတတျဘူး မလိမျညာတတျဘူး ဒါတှကွေောငျ့ ကြှနျမက နားလညျရခကျတဲ့ လူတဈယောကျတော့ မဟုတျဘူးလေ ။
ညဘယျလောကျနကျနကျ သူမဆကျရငျ မြှျောနတေတျမယျဆိုတာ သူသိဖို့ကောငျးတယျ ။ ဘယျလို အကွောငျးအရာပဲဖွဈဖွဈ သူနဲ့ပတျသကျရငျ ကြှနျမ . . . သိခငျြတယျဆိုတာ သိဖို့ကောငျးတယျ ။ ကြှနျမက ခဈြပဲ ခဈြတတျတာပါ . . မရဈတတျဘူး ပွီးရငျ မာယာတှေ မသုံးတတျဘူး ဒါပမေယျ့ ကြှနျမမှာ ဆုံးရှုံးရမှာကိုတော့ ကွောကျတဲ့ စိတျလေးရှိတယျ ။ ဒါတှကေ မိနျးကလေးတိုငျး ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့ အရာတှပေဲ မဟုတျဘူးလား ကြှနျမမှ ထူးခွားပွီး အရာရာကို လိုကျပွီး သိခငျြနတောမြိုးမဟုတျပါဘူး ။
သူသာ . . . တကယျခဈြရငျ ဒါတှေ နားလညျနိုငျမှာပါ …..သူသာ ကြှနျမကို တကယျခဈြရငျပေါ့ ။
သူသာတကယ်ချစ်ရင် . . .
သူသာတကယ်ချစ်ရင်လို့တွေးလိုက်မိရင် ကျွန်မ ရင်တွေနာရပါတယ် ။ သူတကယ်မချစ်ခဲ့ပါလားဆိုတာကို လက်သင့်ခံနိုင်လောက်တဲ့အထိ နှလုံးသားမမာခဲ့တာပေါ့ တကယ်လို့ သူသာ တကယ်ချစ်ရင် ကျွန်မ မျက်ရည်တွေ ကျလာစရာတောင် မလိုဘူးလေ ။ ဖြစ်နိုင်ရင် . . .ကိုယ့်ကို မချစ်လို့နာကျင်စေခဲ့တဲ့သူကို ကိုယ့်ဘက်ကလဲ မာနတွေထားပြီး မေ့ပစ်ချင်တယ် ။
သူသာ တကယ်ချစ်ရင် . . .ကိုယ့်ကို ပျော်အောင်မထားနိုင်ခဲ့ရင်တောင် မျက်ရည်တွေ ကျစေမှာမဟုတ်ဘူးလေ ။ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောပြီး အဆင်ပြေအောင် တိုင်ပင်ဆွေးနေလာမှာပေါ့
သူသာ တကယ်ချစ်ရင် . . .ဘယ်လောက်အလုပ်များများ ကိုယ့်ကို တစ်ချက်မဟုတ် တစ်ချက်တော့ သတိတရရှိမှာပါ ။ အလုပ်မအားလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ တကယ်တော့ မပြည့်စုံပါဘူး ဘာလုပ်နေလို့မအားတာပါဆိုတဲ့ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာတော့ သူ သတိတရနဲ့ပြောဖို့အားကောင်းပါတယ် ။ သူသာတကယ်ချစ်ရင် . . ကျွန်မက မျှော်နေတယ်ဆိုတာမှန်း ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မှာပါ ။
သူသာ . . .တကယ်ချစ်ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကို ကျွန်မ ဆက်ပြီး မတွေးချင်တော့ဘူး ။ပိုပြီးတွေးလေလေ . . .သူက ကျွန်မကို မချစ်မှန်း ပိုပြီးသိလာလာလေလေမို့ကျွန်မ ဆက်ပြီး မတွေးချင်တော့ဘူး ။ ကျွန်မက ပွင့်လင်းတတ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ မလျှို့ဝှက်တတ်ဘူး မလိမ်ညာတတ်ဘူး ဒါတွေကြောင့် ကျွန်မက နားလည်ရခက်တဲ့ လူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူးလေ ။
ညဘယ်လောက်နက်နက် သူမဆက်ရင် မျှော်နေတတ်မယ်ဆိုတာ သူသိဖို့ကောင်းတယ် ။ ဘယ်လို အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့ပတ်သက်ရင် ကျွန်မ . . . သိချင်တယ်ဆိုတာ သိဖို့ကောင်းတယ် ။ ကျွန်မက ချစ်ပဲ ချစ်တတ်တာပါ . . မရစ်တတ်ဘူး ပြီးရင် မာယာတွေ မသုံးတတ်ဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်မမှာ ဆုံးရှုံးရမှာကိုတော့ ကြောက်တဲ့ စိတ်လေးရှိတယ် ။ ဒါတွေက မိန်းကလေးတိုင်း ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အရာတွေပဲ မဟုတ်ဘူးလား ကျွန်မမှ ထူးခြားပြီး အရာရာကို လိုက်ပြီး သိချင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ။
သူသာ . . . တကယ်ချစ်ရင် ဒါတွေ နားလည်နိုင်မှာပါ …..သူသာ ကျွန်မကို တကယ်ချစ်ရင်ပေါ့ ။
အရမျးမှနျးကပျြလာတဲ့အခါ .. ရခေိုးရငှေတှေ့လေို ပြောကျကှယျသှားရငျ ကောငျးမယျ